को चिरपरिचित तेल र ग्याँस बाहेक, त्यहाँ अन्य महत्त्वपूर्ण छन् खनिज। यी रिसाइकिलिंग मार्फत फलाम र nonferrous धातु लागि mined जुन अयस्क, समावेश गर्नुहोस्। अयस्क जम्मा उपस्थिति - कुनै पनि देश को धन छ।
एक अयस्क के हो?
यस प्रश्नको आफ्नै जवाफहरू प्राकृतिक विज्ञान प्रत्येक। Mineralogy अध्ययन जो सबैभन्दा मूल्यवान जनहरूको निकासी प्रक्रिया सुधार गर्न आवश्यक छ समग्र, रूपमा अयस्क खनिज निर्धारण र रसायन धातु को, गुणस्तरीय र मात्रात्मक सामग्री therein पत्ता लगाउन गर्न अयस्क को मौलिक संरचना अध्ययन गर्छ।
यो विज्ञान संरचना र ग्रह गरेको भित्री मा निरन्तर, चट्टानहरू र खनिज, नयाँ खनिज जम्मा को अन्वेषण को गठन को अवस्था प्रक्रियाहरू को अध्ययन हो, किनभने आफ्नो औद्योगिक प्रयोग को औचित्य मामलामा "को अयस्क छ के": भूविज्ञान प्रश्न विचार छ। तिनीहरूले जियोलोजिकल प्रक्रिया को परिणाम औद्योगिक प्रयोग खनिज formations लागि पर्याप्त मात्रा संचित जो मा पृथ्वीको सतह, मा क्षेत्रहरु प्रतिनिधित्व गर्छ।
यसरी, प्रश्न: "? को अयस्क के हो" को fullest तरिका जवाफ हुन सक्छ। अयस्क - यो मा औद्योगिक धातु सामग्री एउटा रक। यस मामला मा यो एक मान छ। धातु अयस्क magma जो यौगिकों तत्संबंधी comprises, ठंडा समयमा गठन। तथापि, तिनीहरूले crystallize, यो यसको परमाणु वजन को सबै भन्दा ठूलो वितरण गरिएको छ। सबैभन्दा गम्भीर magma को तल बसोबास र छुट्टै पत्र मा विनियोजन गरेको। अन्य खनिज चट्टानको गठन र magma hydrothermal तरल पदार्थ को बाँकी शून्य भन्दा सर्छ। तत्व किसिमहरु गठन गर्ने congealing, therein समावेश गर्यो। चट्टानहरु, प्राकृतिक सेना को प्रभाव अन्तर्गत collapsing, ponds तल मा, तलछट गठन सञ्चय छन्। विभिन्न धातु अयस्क गठन चट्टानहरु को संरचना आधारमा।
यी खनिज को प्रकार एकदम फरक हुन्छन्। विशेष फलाम मा अयस्क, के हो? को अयस्क धातु को औद्योगिक प्रशोधन लागि पर्याप्त रकम समावेश छ भने, यो एक फलाम भनिन्छ। तिनीहरूले मूल, रासायनिक संरचना भिन्न र धातु अशुद्धियों सामग्री र कुन उपयोगी हुन सक्छ। सामान्यतया, यो सँगैको गैर-फलाम धातु, सल्फर वा फस्फोरस - यस्तो क्रोमियम वा निकल रूपमा, तर त्यहाँ पनि हानिकारक छन्।
को रासायनिक संरचना फलाम अयस्क यसको विभिन्न आक्साइड र hydroxides, वा फलाम ओक्साइड को कार्बोनिकएसिड लवण प्रस्तुत। भएर विकास अयस्क रातो, खैरो र magnetite र हेमटिट छन् - तिनीहरूले सबैभन्दा धनी मानिन्छ र धातु समावेश 50% भन्दा। द्वारा गरिब ती समावेश जुन कम उपयोगी संरचना मा - 25%।
फलाम अयस्क को संरचना
चुम्बकीय फलाम अयस्क फलाम ओक्साइड छ। यो 70% भन्दा शुद्ध समावेश गर्छ, तर कहिले काँही जस्ता blende र अन्य संस्थाहरू संग, सल्फर pyrites संग जम्मा मा पाइन्छ। Lodestone प्रयोग अयस्क को सबै भन्दा राम्रो मानिन्छ। हेमटिट पनि 70% फलाम सम्म समावेश गर्दछ। रातो फलाम - फलाम ओक्साइड - शुद्ध धातु उत्पादन स्रोतहरू को एक। एक खैरो analogs धातु सामग्रीको 60% सम्म छ र अशुद्धताओं, कहिलेकाहीं हानिकारक फेला परेन। तिनीहरूले जलीय छन् फलाम ओक्साइड र लगभग सबै फलाम अयस्क सँगसँगै। तिनीहरूले पनि उत्पादन, प्रशोधन, तथापि, कम गुणस्तर को अयस्क यस प्रकारको प्राप्त धातु को सुविधाजनक सजिलो छन्।
फलाम अयस्क जम्मा मूल अनुसार, तीन ठूलो समूह विभाजित छन्।
Endogenous वा magmatogene। आफ्नो गठन पृथ्वीको पाप्रो, magmatic घटनाहरूको गहिराइमा मा निरन्तर geochemical प्रक्रियाहरू कारण हो।
Exogenous, वा सतह, को जम्मा पोखरी, नदी र समुद्रहरू तल मा त्यो छ पृथ्वीको पाप्रो को सतह क्षेत्रमा निरन्तर, को प्रक्रियाहरु को एक परिणाम रूपमा सिर्जना गरेका थिए।
Metamorphogenic जम्मा उच्च दबाव र एउटै तापमान अन्तर्गत पृथ्वी सतह देखि पर्याप्त गहिराई मा गठन गरियो।
देश मा फलाम अयस्क भंडार
रूस क्षेत्रहरू को एक किसिम मा धनी छ। विश्व सबै भन्दा ठूलो गरेको - छ , यो कुर्स्क चुम्बकीय विसंगति विश्व रिजर्व को लगभग 50% शामिल। यस क्षेत्रमा, चुम्बकीय विसंगति को XVIII सताब्दी अवलोकन थियो, तर जम्मा विकास मात्र अन्तिम शताब्दीको 30 सेकेन्ड मा शुरू भयो। शुद्ध धातु को एक उच्च सामग्री संग पूल मा अयस्क भंडार, तिनीहरूले टन को अरबौं मा मापन र खुला वा भूमिगत विधि भइरहेका छन्।
Bakchar फलाम अयस्क जम्मा, देश र संसारमा सबै भन्दा ठूलो मध्ये एक छ जो, पछिल्लो शताब्दीको 60s खुलेको छ। अयस्क therein फलाम र 60% शुद्ध एकाग्रता एक साथ रिजर्व बारेमा 30 अर्ब टन छन्।
को क्रास्नायार्स्क क्षेत्र Abagasskoe क्षेत्र हो - magnetite अयस्क संग। यो पछिल्लो शताब्दीको 30-एँ मा पत्ता थियो, तर, यो आधा शताब्दीमा मात्र विकास गर्न थाले। पूल खुला-पिट खानी रहेको र रिजर्व को सही राशि को उत्तर र दक्षिण क्षेत्र मा 73 लाख टन छ।
1856 मा खोलिएको, यो शक्ति अबाकान फलाम अयस्क जम्मा अझै पनि छ। 400 मीटर को एक गहिराई मा भूमिगत - सुरुमा विकास खुला बाटो द्वारा र XX सताब्दी को 60-एँ संग सञ्चालन भएको थियो। को अयस्क को शुद्ध धातु सामग्री 48% गर्न आउँछ।
निकल को एक अयस्क के हो? खनिज formations यो धातु को व्यावसायिक उत्पादन लागि प्रयोग गरिन्छ जो, भनिन्छ निकल अयस्क। तामा र निकल 2.9% समान आंकडा छ चार प्रतिशत धातु शुद्ध सामग्री र सिलिकेट निकल अयस्क, त्यहाँ sulfide। जम्मा पहिलो प्रकार सामान्यतया magma को प्रकार छ, र सिलिकेट अयस्क पाप्रो weathering को क्षेत्रमा अवस्थित छ।
रूस मा निकल उद्योग को विकास XIX सताब्दी को मध्य मा मध्य यूराल मा आफ्नो स्थान को विकास संग जोडिएको छ। लगभग 85% sulphide जम्मा Norilsk क्षेत्रमा ध्यान छन्। को Taimyr प्रायद्वीप मा जम्मा richness र खनिज को रिजर्व को विविधता मा - सबै भन्दा ठूलो र सबै भन्दा तत्व को आवधिक तालिकाको 56 छ जो विश्व, अनुपम। निकल अयस्क गुणस्तर मा रूस अन्य देशहरूमा निम्न छ, र लाभ तिनीहरूले अतिरिक्त दुर्लभ तत्व समावेश छ।
को Kola प्रायद्वीप खेतहरुमा र निकल sulphide स्रोतको बारेमा दस प्रतिशत छ मा मध्य र दक्षिण यूराल सिलिकेट जम्मा विकास गरे।
अयस्क रूस औद्योगिक आवेदन आवश्यक संख्या र किसिम द्वारा विशेषता छन्। तर, त्यही समयमा तिनीहरूले उत्पादन जटिल प्राकृतिक अवस्था, देश भर असमान वितरण, जनसंख्याको घनत्व संग क्षेत्रमा स्रोत निर्धारण को एक बेमेल छन्।
Jackdaw - बर्ड सहयोगी
शार्क-खाने आक्रमण र भूगोल वासस्थानमा गराउनुहुन्छ। के शार्क सामान्यतया मानिसहरूलाई आक्रमण?
युरोप नदीहरु। राइन नदी - पश्चिमी युरोप मा सबै भन्दा ठूलो waterway।
Katun आरक्षित। Katun जीवमण्डल Name रिजर्व
प्रकृति र बिरुवाहरु को भूमिका मा जनावर को मूल्य। मानव जीवनमा पशु
युरोप र यसको सुविधाहरूमा विदेश उद्योग
बगैचा बाटाहरू लागि टाइल: यो शैली कसरी
अचम्मको पशु - फेर्रेट। के तपाईंको पाल्तु जनावर खुवाउन?
एक नागरिक को अधिकार र कर्तव्य कसरी? आधारभूत अधिकार र नागरिक को कर्तव्य
डेरेक रय: क्यारियर ज्ञात क्यानाडा हकी खेलाडी
घर मा घर दूध देखि आइसक्रिम: व्यञ्जनहरु, विशेष गरी खाना पकाउन र समीक्षा
चिनियाँ Aster (callistephus): वर्णन, खेती र हेरविचार